“Barcelona waligeed iskuma dayin inay la soo saxiixdaan Paul Pogba” – Lataliyihii hore ee Kooxda Bacelona – Gool FM
Haaruun October 27, 2020
(Barcelona) 27 Okt 2020. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaan weligeed isku dayin inay la soo saxiixato xiddiga khadka dhexe ee Manchester United ka tirsan Paul Pogba, sida uu ku warramayo lataliyihiin hore ee Barcelona.
Ariedo Braida oo ah lataliyihii hore Barcelona ee dhinaca xiddigaha dibadda ka ciyaara ayaa ayaa daboolka ka qaaday in kooxdiisu aysan waligeed isku dayin inay la soo saxiixato Paul Pogba.
Braida waxa uu meesha ka saaray warar dhowaan soo baxayey oo soo jeedinayey in xiddigan khadka dhexe ee reer France laga doonayo garoonka Camp Nou oo ay ku ciyaarto kooxda Barcelona.
Isagoo wargeysi siinayay Jariiradda Marca ee ka soo baxda dalka Spain, Ariedo Braida waxa uu sheegay in aysan kooxda reer Spain ee Barca waligeed isku dayin inay la soo saxiixato xiddiga ku guuleystay Koobkii Adduunka ee lagu qabtay dalka Ruushka.
Waxa uu Braida arrintan soo hadal qaaday isagoo ka jawaabayay su’aal xiriir la leh inuu isku dayey oo uu ka shaqeeyey qaabkii uu Paul Pogba ugu dhaqaaqi lahaa kooxda Barcelona.
Isagoo ka jawaabay arrintaas Braida waxa uu yiri: “Waa been, balse waxaa run ah in Albert Soler iyo anigu aan tagnay Milan oo aan la kulanay ragga ugu sarreeya kooxda Juventus.
“Laakiin ka sokow wadahadalka ma jirin wax dareen dhab ah oo aan isaga kula soo saxiixanayno.
“Xaqiiqdu waxa ay tahay in Pogba uu xilli ciyaareedkaas ku dhammaystay Turin, isla markaana uusan doonaynin inuu tago koox kale.
“Waxaan u sheegay iyaga inuu ahaa xiddig wanaagsan, waxaanan kala hadlayay Albert Soler oo aan rumaysnaa inaan leenahay xiriir saaxiibtinnimo oo wanaagsan oo ah mid shaqsi ah, laakiin mar kale, xirfad ahaan, kama anaan wadashaqayn karayn saxiixa Pogba, sababtoo ah la iima ogolayn.”